The big tourist warning for Myanmar - Myanmar News - Mingalapar Forum
Started by BurmeseNews , Sep 02 2017 02:55 AM
Posted 02 September 2017 - 02:55 AM
Myanmar isadevoutly religious country. The vast majority are Theravāda Buddhist and they take their faith very seriously. So much so that under Myanmar law, insulting religion isaserious offence, punishable by imprisonment.
အရှေ့တောင် အာရှမှာ မြန်မာက ခရီးသွားတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့ အတွေ့အကြုံရမယ့် နေရာ တနေရာ ဖြစ်လာနေပါတယ်။ ခရီးသွားတွေများလာတာနဲ့ အမျှ လာမည့် တိုးရစ်တွေ သတိထားရမယ့် အချက်လည်းရှိပါတယ်။
အဲဒါကတော့ မြန်မာဟာ ဘာသာရေး လွန်စွာ ကိုင်းရှိုင်းသော နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာပါ။ အများစုက ထေရ၀ါဒကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြပါတယ်။ မြန်မာ့တရားဥပဒေအရလည်း ဘာသာရေးကို စော်ကားမှုက ထောင်ဒဏ်ကျခံနိုင်ရတဲ့အထိ ပြစ်မှုမြောက်ပါတယ်။
source : http://www.news.com....4b99f529e53981
Also tagged with one or more of these keywords: Tourism, Warning
Started by BurmeseNews , 18 Dec 2017 tourism, destinations
Started by BurmeseNews , 20 Oct 2017 tourism, Myanmar
Myanmar emphasis on ecotourism
Started by BurmeseNews , 13 Aug 2017 tourism